Bhaibheri Rinodzidzisa Kuti Nyika Yakati Sandara Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bislama Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Ossetian Persian Polish Portuguese Romanian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Welsh Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Bhaibheri Rinodzidzisa Kuti Nyika Yakati Sandara Here?
Aiwa, Bhaibheri haridzidzisi kuti nyika yakati sandara. * Bhaibheri harisi bhuku resainzi. Asiwo haripesani nezvinotaurwa nesainzi. Zvarinotaura zvinovimbwa nazvo ‘nekusingaperi uye nekusingagumi.’—Pisarema 111:8.
Bhaibheri rinorevei parinoti “migumo mina yenyika”?
Ko zvakataurwa naSatani paaiedza Jesu?
Mashoko ari muBhaibheri ekuti “migumo mina yenyika” uye “migumo yenyika” haafaniri kutorwa sezvaari, kuita sekuti nyika ine makona mana kana kuti ine kwainogumira. (Isaya 11:12; Jobho 37:3) Mashoko aya zvirungamutauro zvinongoreva kuti nyika yese. Bhaibheri rinotaurawo kuti kune kuchamhembe, kumaodzanyemba, kumabvazuva nekumavirira.—Ruka 13:29.
Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “migumo” rinofanira kunge rakabva padimikira rine shoko rinoreva kuti “mapapiro.” Kuwirirana nezviri mubhuku rinonzi The International Standard Bible Encyclopedia, ‘mapapiro eshiri anoshandiswa kuvharidzira manyana. Saka shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti ‘migumo’ rinoreva chinhu chakatambanuka.’ Bhuku iri rinotiwo pana Jobho 37:3 uye Isaya 11:12, “shoko racho rinoreva mhenderekedzo, miganhu kana kuti kunoperera nyika.” *
Bhaibheri rinoti: “Dhiyabhorosi akaenda [naJesu] kugomo refu refu, akamuratidza umambo hwose hwenyika nokubwinya kwahwo.” (Mateu 4:8) Vamwe vanoti nyaya iyi iri muBhaibheri inototiratidza kuti nyika yakati sandara uye ndicho chikonzero nei Jesu akakwanisa kuona nyika yese. Asi “gomo refu refu” iri rakanga risiri gomo chairo chairo. Inzwa zvikonzero zvinoita kuti tidaro.
Hapana gomo rekuti munhu akakwira anokwanisa kuona umambo hwese huri panyika.
Satani akaratidza Jesu umambo hwese hwepanyika uye “kubwinya kwahwo.” Munhu haakwanisi kuona zvese izvi ari kure, saka Satani anofanira kunge aine zvaakaita kuti Jesu aone zvese izvi. Izvi tinogona kuzvifananidza nemunhu anenge achiona paTV mapikicha enzvimbo dzakasiyana-siyana dziri pasi rese.
Ruka 4:5 inotiwo Satani akaratidza Jesu “munguva pfupi pfupi . . umambo hwose hwenyika inogarwa,” asi munhu haakwanisi kuona zvinhu izvozvo nemaziso ake. Izvi zvinoratidza kuti Satani ane zvaakaita kuti Jesu aone zvese izvi.
^ ndima 3 Bhaibheri richitaura nezvaMwari rinomuti “agere pamusoro pedenderedzwa renyika.” (Isaya 40:22) Mamwe mabhuku anoti shoko rashandiswa rekuti “denderedzwa” rinoreva chinhu cheraundi, asi dzimwe nyanzvi hadzibvumirani nazvo. Chero zvavangataura, asi Bhaibheri haridzidzisi kuti nyika yakati sandara.
^ ndima 8 Revised Edition, Volume 2, peji 4.
Sayenzi iri muBhaibheri ine painorasika here?
Bhaibheri Rasara Nenguva Here Kana Kuti Ritori Kumberi?
Dhiyabhorosi Anoedza Jesu